Ini ndangotumira $ 1000 kuna Noah! | Martech Zone
Ini ndangotumira $ 1000 kuna Noah!
Svondo, November 25, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndine urombo nekunonoka kumhanya pane izvi! Isu takatumira runyorwa rwezvakanyorwa ku Ade nechinhu chega chega chekupinda chine nhamba yakasarudzika inosanganisirwa (uchishandisa iyo RAND basa muExcel uye wozogadzirisa ikholamu). Isu takabva tave Hannes sarudza nhamba yakasarudzika mukati memazana gumi neshanu kuitira kuti Hannes asazive kuti ndiani anokunda angave. Iye akahwina iyo $ 108 yekupa aive Noah pa wpstar.com!
Kuvhara iyo Paypal transaction mitengo, ini chaizvo ndakatumira $ 1,040 kuna Noah! Wakafadza Noah! Yasara mibairo ichave iri munzira futi!
Tags: otomatikiMumhanzi microdataVanhu microdataChigadzirwa microdataChigadzirwa microdata ine zvakawanda zvinopihwatwitter vateveriyoutube mufananidzo
Nov 25, 2007 na5:56 PM
Nov 25, 2007 na6:00 PM
Nov 25, 2007 na7:31 PM
Feb 21, 2008 at 11:24 PM